माया हुँदाहँदैपनि सलमान र कैटरीना एक हुन नसक्नुको कारण बाहिरियो यस्तो रहस्य! – PathivaraOnline
Home > अपराध > माया हुँदाहँदैपनि सलमान र कैटरीना एक हुन नसक्नुको कारण बाहिरियो यस्तो रहस्य!
admin December 1, 2020 अपराध, जीवनशैली	0
एजेन्सी । बलिउडका सुपरस्टार सलमान खानले ऐश्वर्य रायलाई साँचो माया गरेका थिए । तर उनी आफ्नो मायामा सफल हुन सकेनन् । ऐश्वर्यपछि सलमानको जीवनमा कैटरीना कैफले प्रवेश गरिन् । उसो त सलमानको नाम बलिउडमा प्रवेश गर्ने प्राय सबै नयाँ हिरोईनसंग जोडिएकै हुन्छ । तर सलमानले ती सबै नाम जोडिएकालाई साँचो माया भने गरेका हुँदैनन् ।
यसै प्रसंगमा कुरा गर्ने हो भने सलमानले साँचो माया ऐश्वर्यपछि कैट्रिनालाई नै गरेका हुन् । तर केही कारणले गर्दा उनी यो आफ्नो प्रेममा पनि सफल हुन सकिरहेका छैनन् । सलमान र कैट्रिनाको जोडीलाई कुनै समय बलिउडमा निकै नै रुचाईन्थ्यो । सलमान र कैट्रिनाका फ्यानहरुले त अहिले पनि सलमानले कैट्रिनालाई बिहे गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहाना राखि राखेकै छन् । तर फ्यानहरुको यो चाहाना भने पुरा हुन सकिरहेको छैन ।
पैसा हेरेर बुवा जस्तो मान्छेसंग बिहे गर्यो भन्नेलाइ सिल्पाले दिईन् यस्तो जवाफ (भिडियो सहित)
आमाको १३औं पुन्य तिथिमा ऋचा शर्माले आमालाई सम्झदै लेखिन् यस्ताे मनछुने स्टाटस् ( पढ्नुहोस् )